Jehovha anosimuka kuti aite chimwe chinhu
Zvinotaurwa naMwari zvakachena (6)
Kumutungamiriri; ruchiridzwa nemutinhimira weSheminiti.*Rwiyo rwaDhavhidhi. 12 Ndiponeseiwo Jehovha, nekuti hapasisina munhu akavimbika;Vanhu vakatendeka vanyangarika pakati pevanhu. 2 Vanotaurirana nhema;Vanonyengera nemiromo yavo uye vanotaura nemwoyo inonyengera.+ 3 Jehovha achacheka miromo yese inonyengeraUye rurimi runozvikudza,+ 4 Vaya vanoti: “Tichakunda nerurimi rwedu. Tinoita zvatinoda nemiromo yedu;Ndiani achava tenzi wedu?”+ 5 “Nekuti vanotambudzika vakadzvinyirirwa,Nekuti varombo vari kugomera,+Ndichasimuka kuti ndiite chimwe chinhu,” anodaro Jehovha. “Ndichavanunura pavanhu vanovashora.”* 6 Zvinotaurwa naJehovha zvakachena;+Zvakaita sesirivha yakanatswa, yakacheneswa kanomwe muchoto chakaumbwa nevhu.* 7 Muchavachengetedza, haiwa Jehovha;+Muchadzivirira mumwe nemumwe wavo pachizvarwa ichi nekusingaperi. 8 Vakaipa vanofamba-famba pasina anovadzoraNekuti vanakomana vevanhu vanokurudzira uipi.+
^ Kana kuti “vanovatsvinyira.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “muchoto chekunyungudutsira chakagadzikwa pasi.”